1 Mpanjaka 16 - Ny Baiboly
1 Mpanjaka toko 16
Baasà, Elà, Zambrì, ary Amrì, mpanjakan'Israely - Fiandohan'i Akaba.
1Ary tonga tamin'i Jehoa, zanak'i Hananì, ny tenin'ny Tompo namely an'i Baasà, nanao hoe: 2Nasandratro avy amin'ny vovoka hianao, ary natsangako ho mpanjakan'Israely oloko, kanjo ny làlan'i Jeroboama no nalehanao, ary Israely oloko nampanotainao, mba hampahatezitra ahy amin'ny fahotan'izy ireo. 3Noho izany, indro hofongorako kosa Baasà sy ny tranony, ary hampanahafiko ny tranon'i Jeroboama zanak'i Nabata, ny tranonao. 4Ka ny tamingan'i Baasà maty an-tanàna, hohanin'ny alika, ary ny tamingany maty an-tsaha, hohanin'ny voromanidina.
5Ny sisa tamin'ny asan'i Baasà, mbamin'izay nataony, sy ny herim-po nasehony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin'ny Tantaran'ny mpanjakan'Israely va izany? 6Ary nodimandry any amin'ny razany Baasà, ka nalevina ao Tersa. Elà zanany lahy, no nanjaka nandimby azy.
7Ary ny tenin'ny Tompo dia nampitondraina tamin'ny alalan'i Jehoa, mpaminany, zanak'i Hananì, hihatra amin'i Baasà sy ny tranony noho ny ratsy rehetra nataony teo imason'ny Tompo, nampahatezerany azy tamin'ny asan'ny tànany, sy nanahafany ny tranon'i Jeroboama, ary noho izy namono izany fianakaviana izany koa.
8Tamin'ny taona fahenina amby roapolon'i Asà, mpanjakan'i Jodà, dia tonga mpanjakan'Israely tany Tersa, Elà zanak'i Baasà, ary roa taona no nanjakany. 9Niteti-dratsy hamely azy Zambrì, mpanompony, lehiben'ny antsasaky ny kalesiny. Ka raha ilay nisotro sy nimamo iny izy, tao Tersa, amin'ny tranon'i Arsà, lehiben'ny ankohonany ao Tersa, 10dia niditra Zambrì, ka namono ary nahafaty azy, tamin'ny taona fahafito amby roapolon'i Asà, mpanjakan'i Jodà, ary nanjaka nandimby azy izy. 11Nony tonga mpanjaka sy tafapetraka tamin'ny seza fiandrianany izy, dia novonoiny avokoa ny fianakavian'i Baasà, ka tsy nasiany lahy iray nitsangana, na ny mpianakaviny na ny sakaizany. 12Toy izany no namongoran'i Zambrì ny fianakavian'i Baasà rehetra, araka ny tenin'ny Tompo, izay nolazainy tamin'ny alalan'i Jehoa mpaminany nihatra tamin'i Baasà, 13noho ny fahotana rehetra nataon'i Baasà sy Elà zanany, sy nampanaoviny an'Israely, ka nampahatezerany an'ny Tompo Andriamanitr'Israely tamin'ny sampiny.
14Ny sisa tamin'ny asan'i Elà, mbamin'izay rehetra nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin'ny Tantaran'ny mpanjakan'Israely va izany?
15Tamin'ny taona fahafito amby roapolon'i Asà, mpanjakan'i Jodà, no nanjakan'i Zambrì, hafitoana, tao Tersa. Tamin'izay ny vahoaka, dia nitoby tandrifin'i Gebetona izay an'ny Filistina, 16ary ny vahoaka mbola nitoby teo ka nandre ny vaovao hoe: Miteti-dratsy Zambrì, sady efa matiny aza ny mpanjaka! Ka androtrizay ihany Israely rehetra teo an-toby, dia nanangana an'i Amrì, filohan'ny tafika, ho mpanjakan'Israely. 17Dia niakatra avy any Gebetona Amrì sy Israely rehetra niaraka taminy ka tonga nanao fahirano an'i Tersa. 18Nony hitan'i Zambrì fa afaka ny tanàna, dia lasa niditra ao amin'ny trano mimandan'ny tranon'ny mpanjaka izy, ka nodorany aman-trano tao ny tenany. Toy izany no nahafatesany, 19noho ny fahotana nataony, tamin'ny nanaovany izay ratsy eo imason'ny Tompo sy nandehanany tamin'ny làlan'i Jeroboama ary tamin'ny fahotana nataon'i Jeroboama hampanota an'Israely.
20Ny sisa tamin'ny asan'i Zambrì, mbamin'ny teti-dratsy nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tantaran'ny mpanjakan'Israely va izany?
21Nizara ho antokony roa ny vahoaka amin'Israely tamin'izay, ny antsasaky ny vahoaka moa nomba an'i Tebnì, zanak'i Gineta hampanjaka azy, ary ny antsasany nomba an'i Amrì. 22Resin'ny nomba an'i Amrì ny nomba an'i Tebnì, zanak'i Gineta, ka dia maty Tebnì, ary Amrì no nanjaka.
23Tamin'ny taona faharaik'amby telopolon'i Asà, mpanjakan'i Jodà, dia tonga mpanjakan'Israely kosa Amrì, ary roa ambin'ny folo taona no nanjakany. 24Nony nanjaka enin-taona tao Tersa izy, dia novidiny tamin'i Somera talenta volafotsy roa, ny tendrombohitr'i Samaria, ka nanorin-trano teo ambonin'ny tendrombohitra izy, ary nataony hoe Samaria; avy amin'ny anaran'i Somera tompon'ny tendrombohitra ny anaran'ny tanàna naoriny. 25Nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo Amrì, sady nanao ratsy mihoatra izay rehetra talohany izy. 26Nandeha tamin'ny làlana rehetra nalehan'i Jeroboama zanak'i Nabata izy, sy tamin'ny fahotana nampanaoviny an'Israely, ka nampahatezitra an'ny Tompo Andriamanitr'Israely tamin'ny sampiny.
27Ny sisa tamin'ny asan'i Amrì mbamin'izay nataony aman-kerim-po nasehony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tantaran'ny mpanjakan'Israely va izany? 28Ary nodimandry any amin'ny razany Amrì, ka nalevina ao Samaria. Akaba zanany lahy, nanjaka nandimby azy.
29Tamin'ny taona fahavalo amby telopolon'i Asà mpanjakan'i Jodà no tonga mpanjakan'Israely kosa Akaba zanak'i Amrì, ary roa amby roapolo taona no nanjakan'i Akaba zanak'i Amrì, tao Samaria, tamin'Israely. 30Nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo mihoatra noho izay rehetra teo alohany, Akaba zanak'i Amrì. 31Hoatra ny noheveriny fa zavatra kely foana ny mandeha amin'ny fahotan'i Jeroboama zanak'i Nabata, ka dia nalainy ho vady Jezabela, zanakavavin'i Etbaala, mpanjakan'ny Sidoniana, ka dia lasa izy nanompo an'i Baala sy niankohoka teo anatrehany. 32Nanangana otely ho an'i Baala izy, tao amin'ny tranon'i Baala nataony tao Samaria; 33sady nanao Aserah koa Akaba. Nanao izay nampahatezitra an'ny Tompo Andriamanitr'Israely Akaba mihoatra noho ny mpanjakan'Israely rehetra talohany.
34Fahavelony dia nanorina an'i Jerikao, Hielà avy any Betela, kanjo ny ain'i Abirama lahimatoany, no sazin'ny nanorenany ny fotony, ary ny ain'i Segoba zanany faralahy, no sazin'ny nananganany ny vavahadiny, araka ny tenin'ny Tompo izay nolazainy tamin'ny alalan'i Josoe zanak'i Nona. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3086 seconds